သစ္စာရှိကြေး ~ White Angel
10:39 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 27 comments
အချစ်ရက်ကလေး တရက် နောက်ကျတာကိုတော့
မေ့ နောက်မှာ နောက်တယောက်မရှိရင် ကျေနပ်တယ်
မချစ်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ ရက်တွေအတွက်
မိုးစက်လေးတပွင့်ဝေတာ စာမဖွဲ့ လောက်ပေမဲ့
ကိုယ့်ရင်ထဲ မီးလိုတောက်တတ်တာ(သ၀န်တိုခြင်း) ကိုတော့
အချစ်သိစေချင်တယ် . . .
ဖူးစာရှင်မလေး " သခင့် " ကိုရှာချိန်
အချစ်စောရနက္ခတ်နဲ့မောင်တယောက်
ရှေ့ နောက်မှာ မင်းတယောက်တည်းဆိုတာ ယုံ . . .
တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းအုတ်မြစ်ကို
ခိုင်မြဲတဲ့လက်တစ်စုံနဲ့ လက်တွေ့ တည်ဆောက်မယ် . . .
(ကဗျာရေးသူ။ ။ ကျမ+မောင်)
ပုံလေးရော .. ကဗျာလေးရော မိုက်တယ်..
ကဗျာလေးက ကောင်းမှကောင်း ပါလား မရေ....
မနမ်းရေ အသုံးလေးက အရမ်းလှတာပဲဗျာ။
အချစ်သူခိုးလေးကို အချစ်စောရနက္ခတ်ဆိုပြီးသုံးထား တာလေ။ အင်း မမက ကဗျာရေးလည်းကောင်းတာပဲ။
ကဗျာရေးသူတွေကို စိတ်ဝင်စားသွားသလို ခံစားမိပါတယ် သစ္စာရှိကျေးလို့ပြောခဲ့ကြပေမဲ့…….
ကဗျာလေးက ကောင်းတယ်ဗျာ နူးနူးညံ့ညံ့
သိမ်သိမ်မွေ့ မွေ့ လေးပါဘဲ စားသားအား
တွေကတော့ ပိုပိုကောင်းလာတယ်ဗျာ ချစ်ရ
တဲ့မောင်နဲ့ လည်း မြန်မြန်ပေါင်းစည်းနိူင်ပါစေ
လို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် အမရေ ကဗျာ
လေးတစ်ပုဒ်လုံးကို ကြိုက်နေမိတော့ ဘယ်စာ
နေလို့ မပြတော့ပါဘူး ခင်မင်အားပေးလျက်....
May God Bless you in every single walk of your life
အံမယ် ငါ့အစ်မကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ။ ဟိုတစ်ယောက်ကပါ ပါသေးဆိုပဲ။ မိုးမမြင်လေ ချစ်နေကြတယ်ပေါ့ ။ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလောင်းကျော်.အဲ.. ရွှေလက် ခိုင်ခိုင် တွဲနိုင်ကြပါစေဂျာ
မနာလိုတောင် ဖြစ်မိပါ့း)
မယ်တစ်ထမ်း မောင်တစ်ရွက် မဟုတ်ဘဲ
မယ်တစ်ပိုဒ် မောင်တစ်ကြောင်း စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးထင်ပါရဲ့
အမြဲတမ်း ခုလို အဆင်ပြေကြပါစေ။ ဆထက်များစွာ ချစ်နိုင်ကြပါစေလို့
း) အခုတလော ငါ့အစ်မ ကဗျာနုနုလေးတွေရေးသဗျာ့
ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်း ပြာယာခတ်နေတာနဲ့ ပဲ ကိုယ့်မွေးနေ့ ကိုယ်မေ့ချင်ချင်ဖြစ်သွားတာ အသက် ၂၈ ကို အသက်လာမေးရင် နှစ်ဆယ်ကျော်လို့ဖြေတယ် ဟိ ဟုတ်တာပဲလေ နှစ်ဆယ်ကျော်ပဲဟာကိုနော့း)း) အသက်၂၅ကျော်လာကတည်းက မွေးနေ့ကိုသိပ်မမှတ်ထားတော့ဖူးး)း)း)
ငါ့တူမ ကဗျာလေးတွေက ပိုလို့ပိုလို့ ဖတ်ကောင်းလာပြီ..
ကိုယ်ခင်မင်ရသူတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိနေတာမို့ ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။
ချစ်သူဘဝမှာထဲက သစ္စာတိုင် ကို ခိုင်မြဲစွာ တည်ဆောက်ပြီး ရာသက်ပန် လက်တွဲနိင်ပါစေဗျာ။
နတ်သမီးရဲ့ မောင်နဲ့ သီတင်းကျွတ်ပြီးလောက်ဆို မြန်မြန်ပေါင်းစုံရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာလို ၀ါခေါင်လဆုတ် ၉ ရက်နေ့နော် .... မကြာခင် တော်သလင်း ပြီးရင် သီတင်းကျွတ်လာတော့မည် ........ ဘ၀ကို အသက် ၄၀ မှစမယ့် သူတွေနဲ့ တော့လိုက်ပြီး မယှဉ်နဲ့နော် .......... ကဗျာထဲက စကားလုံးတချို့က တကယ် မိုက်တယ် နတ်သမီးရေ ......
တစ်ကယ့် လက်တွေ့မှာ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်
ကဗျာတစ်ပုဒ်မှာ မောင့်ခံစားချက်တစ်ဝက် မယ့်ခံစားချက်တစ်ဝက်
ပြီးတော့ ကဗျာလေးက အနှစ်သာရလေးပြည့်ပြီး တစ်ကယ်ပဲ
"နှစ်အိပ်မက်မရှိတဲ့ နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက် "...ဆိုတဲ့
ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဘ၀ခရီး ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ လက်တွဲနိုင်ပါစေနော်..။
အချစ်ကဗျာလေးတွေဖတ်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက်က အဗျာတွေ တ၀ကြီးရေးပြီး ရင်ခုန်ရသူကို ပေးဖြစ်ခဲ့တာ သတိရလိုက်မိတယ် မဖြူရောင်ရေ...
ကဗျာလေးက သိပ်နုလွန်းတယ်။ သိပ်လှလွန်းတယ်။ အဲလို ချစ်နိုင်ကြတဲ့ အစ်မတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်း ချီးကျူးတယ်။ လေးစားတယ်။ အားကျတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အချစ်ဆိုတာ အဲလောက်နုလှနေအောင် မချစ်တတ်သေးဘူး။ မချစ်ဖူးသေးဘူး။ အဲဒီတော့ ယုံလည်း မယုံးသေးဘူး :)
ကြေးရဲ့ ခေတ်က ကုန်ပြီမို့
ကဗျာလေးက ကောင်းလိုက်တာ.... "အတွေ့နောက်ကျပေမယ့်..မေ့နောက်မှာ နောက်တစ်ယောက်မရှိရင် ကျေနပ်တယ်.." အရမ်းကြိုက်တယ် အစ်မ ...